'American Horror Story' na-ekere òkè na Teas ma malite Oge Oge 10
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'American Horror Story' na-ekere òkè na Teas ma malite Oge Oge 10
edere ya Trey Hilburn III August 31, 2020
American Horror Story emeela ka ndị agbụrụ na-emegharị ahụ. Usoro ihe omuma banyere usoro anthology abanyewo n'okporo uzo di iche iche nke oge iteghete. Otu ọ bụla, ụzọ na - eduga anyị na ụdị mkpụrụ ndụ dị iche iche nke sitere na 80 slashers ruo ọgbụgba amoosu na ihe niile dị n'etiti. Ugbu a ọ dị ka Akụkọ American Horror Akụkọ oge nke iri amalitela mmepụta.
Onye Okike, Ryan Murphy weere na Instagram iji kesaa ụfọdụ ndị mmụọ ọjọọ na-achọ ezé na-ele anya ezé yana ozi iji melite ndị fan.
“Ọ dị ka American Horror Story Oge 10 na-aga maka mmepụta nke October (dabara adaba). Ekele dịrị onye ọ bụla na-arụsi ọrụ ike iji mee ka obi sie ndị mmadụ na ndị ọrụ ya ike ịmalite mmalite. Ee ee nke a bụ ntụzi aka. ” Murphy dere.
Onwebeghi okwu banyere isiokwu nke oge nke iri ga-aga. Anyị maara na ọ nwere ike ịdị na-eme n'akụkụ oke osimiri. Eziokwu ahụ tinyere azụ degon na-ele anya ezé Murphy ezigara na-eduga anyị ikwere na oge ọzọ a ga - abụ HP Lovecraft na egwu mmiri nke sitere n'ike mmụọ nsọ.
Nke ahụ bụ echiche nke eziokwu. Agbanyeghị, oke osimiri na ezé, tinyere eziokwu ahụ bụ na Lovecraft mechara bụrụ ihe na-ewu ewu bụcha ezigbo akara ngosi.
Kedu ihe ụmụ unu chere na oge nke 10 nke American Horror Story ga-banyere? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Akpịrị ịkpọ nkụ maka egwu mmiri ọzọ? Pịa ebe a.
84American Horror StoryỌgbụgba ndụòtù nzuzoRyan Murphy
New 'Paranormal Arụ Ọrụ' ọkwa ọkwa leasebọchị mwepụta
'Ihe nkwụnye' na-enweta ihe nkiri nke mbụ